पार्टी एकता समृद्धिको आधार
२०७४ असोज १७ गते ने.क.पा. एमाले. र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल गरी स्थानीय निर्वाचनदेखि सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा भाग लिने सहमतिका आधारमा निर्वाचनपछि एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्नेे उद्घोष गरिएको थियो । यो अभियानलाई विफल बनाउन विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी पनि चक्कर लगाइरहेका थिए । बीचमा एकीकृत हुने भन्ने तर फेरि सम्बन्ध चिसिँदै गएको देखिँदा शुभेच्छुकमा कतै यो अभियान भताभूङ्ग त हुँदैन भन्ने शङ्का पनि उठ्यो । इतर पक्ष खुशी हुने भए कि भन्ने पनि परेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकृत पार्टी निर्माण हुन सक्दैन भन्ने शङ्का र भ्रम चिर्न जेठ २ गते बुधबार एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सफल हुनुभयो । उहाँहरूबीच पार्टी एकीकरणको सहमति भएबमोजिम हिजो जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भयो । विगतमा फरक वैचारिक धार समातेका नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एउटै शान्तिपूर्ण धारमा समाहित भएको यो घटना विश्व कम्युनिष्ट इतिहासमै नौलो आयाम बनेको छ । यसले गैरवामपन्थी विश्वलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ ।
यसो त नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा टुटफुट र एकीकरणको लामो शृङ्खला छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा सोभियत सङ्घको विभाजनदेखि समेत टुट्ने फुट्ने क्रम जारी थियो । सानो विमति हुँदासाथ चर्को आलोचनासहित विभाजित भइहाल्ने इतिहास रहेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पहिछल्लो समयमा पनि स–साना वाम पार्टीहरू निकै छन् । यस्तो अवस्थामा दुई ठूला दल जसको आ–आफ्नै विरासत छ, कसरी एकता सम्भव छ भन्ने प्रश्न पनि थियो नै । यस्ता प्रश्नको जवाफ चमत्कारपूर्ण रूपले शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिले दिन सफल भएको छ ।
एमाले र माओवादीबीच समझदारीमा दुई अध्यक्षसहित केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति हाइकमाण्डलगायतका संरचना बनाइएको छ । नयाँ विधान स्वीकृत भएको छ । नयाँ पार्टीको महाधिवेशन दुई वर्षभित्र गर्ने रसमझदारीमै नेतृत्व चयन गरिने, महाधिवेशनसम्म सैद्धान्तिक बहस गर्ने र पार्टीको सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद राख्ने समझदारी भएको जानकारीमा आएको छ । यो एकता प्रक्रिया र कमिटी संरचना तथा दृष्टिकोणका सवालमा पनि सम्मानजनक भएको छ । अब सङ्घीय संरचना अनुरूप सातै प्रदेशका संरचना तथा जनवर्गीय सङ्गठनका संरचना निर्माणमा पनि ससम्मान, कार्यक्षमताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिनुपर्नेछ ।
करिब सात दशकपछि एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । यसो त पार्टीको नाम अगाडि वा पछाडि अनेक शब्दावली जोडेर आफूलाई मूल धारको, एकताबद्ध, ठूलो देखाउने भ्रममा थिए कम्युनिष्ट पार्टी । तर वास्तवमा यो नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी नै अब मूलधारको र एकताबद्ध पार्टी बन्ने अपेक्षा सर्वत्र छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमै यो घटना स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ । यो अवसरलाई सदुपयोग गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको समृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । शाह वंशीय शासन, राणा शासन, पञ्चायती शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रणाली रहेको सामन्तवादी संरचना ध्वस्त पारी नेपालीले आफैँले चाहेको संविधान निर्माण भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय संसद्को समेत निर्वाचन भई नेपाली जनताले यही शक्तिलाई देशको शासन सत्ताको बागडोर जिम्मा लगाएको छ । त्यो जिम्मेवारी सफलताका साथ पूरा गर्न अलगअलग दलको रूपमा होइन, एकीकृत रूपमा अगाडि बढून् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो, जुन साकार भएको छ । यो पार्टी देशका तमाम समस्यालाई समाधान गरी समृद्धितर्फ बेजोड ढङ्गले लाग्नुपर्छ । वास्तविक रूपमा समृद्धिको आधार भनेकै कम्युनिष्टको एकता र देशप्रतिको समर्पण हो भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ का प्रावधानबमोजिम नै नयाँ पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यही स्तरको चेतना नेता, कार्यकर्तामा हुनुपर्छ तर यही शक्तिका कुनै सांसदले पहिलेकै संविधानबमोजिम संसद् विकास कोष हुनुपर्छ भन्नेजस्ता तर्क दिएको सुन्दा सोच पुरातनपन्थी नै रहेको देखिन्छ । अब पुरानो मानसिकता बदलिनुपर्छ । जब संविधान नै पूरै बदली स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको जिम्मामा बजेट जाने कुरा प्रष्ट छ भने एकीकृत पार्टीले आफ्नै सांसदलाई मानसिकता बदल्ने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कतिपय सङ्घीय सांसद्ले पहिलाकै प्रतिनिधि सभाको सांसदजस्तो आफूलाई सम्झिरहेको देखिन्छ । संविधान पुराण होइन, बाईवल होइन, संशोधन गर्नुपर्छ फेरि केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ भने जस्ता अभिव्यक्ति पनि सङ्घीय सांसदका सुनिन्छन् । यस्तो सोच सङ्घीयता विरोधी हो । यो एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना सांसददेखि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई संविधान, यसको लक्ष्यका आधारमा पार्टी र सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम सफल पार्न अब व्यापक प्रशिक्षण चलाउनुपर्छ ।
वास्तवमा एकीकृत पार्टी बन्दैमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने विश्वास गरिहाल्न सकिन्न । मूल कुरा एकीकृत पार्टीको सिङ्गो शक्ति एकताबद्ध रूपमा संविधान, पार्टी र यसको सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई जनतासँग जोड्दै काममा खटिन्छ कि खटिँदैन भन्ने कुराले विकास र समृद्धिको सपना निर्धारण हुनेछ । एकीकृत पार्टीमा कैयौँ नेता, कार्यकर्तामा जिम्मेवारी, अवसर आदिका असन्तुष्टि स्वाभाविक रूपमा देखिन सक्छन् तर तिनलाई सम्बोधन गरी काममा व्यस्त राख्ने नेतृत्व क्षमता चाहिन्छ । अनि विगतको विभाजन र विचलनबाट आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भएको यथार्थ मनन गरी कार्यकर्ता एकमना एकताको भावनासाथ विकासका कुरामा प्राथमिकता दिएर खटिनुपर्छ ।